Izinqolobane ze-FOIA - Ilungelo Lethu lase-US Lokwazi
Imibhalo ye-FDA FOIA Mayelana Nokuhlolwa Kwezinsalela zeGlyphosate
Posted on Kwangathi 10, 2018 by UCarey Gillam
Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa kuphendule izicelo ze-Freedom of Information Act (FOIA) zemininingwane mayelana nemizamo yayo yokuqala ukuhlola amasampula okudla ezinsalela ze-glyphosate kanye neminye imithi yokubulala ukhula, kufaka phakathi i-2,4-D.
Eminingi yale mibhalo ingatholakala ngezansi:
I-FDA FOIA 2017-7005
I-FDA FOIA 2017-7005 ingxenye 2
Amarekhodi Okuphendula Okugcina we-FDA (2017-7005) Ingxenye 3 (Yenziwe kabusha)
Okunamathiselwe kwe-FDA FOIA 2017-7005
Amarekhodi Aphendulayo we-CFSAN (2017-7005) Ingxenye Yesikhashana Yokuphendula (ama-imeyili abhalwe ama-OC-ORA abomvu) _Redacted (2)
Ukuhlaziywa kwe-FDA FOIA Izinhloso zokuhlaziya ukhula
Amarekhodi Aphendulayo weCFSAN (Aphindiwe) 2017-10178
Amaminithi Wokuhlangana we-FDA Pestag ngo-Ephreli 19, 2017
FDA Mashi 15, 2017 Amaminithi Wokuhlangana we-PesTAG
Amaminithi we-FDA wokushaya ucingo ngoFebhuwari 10, 2016
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane amakhemikhali, EPA, FDA, FOIA, Ukudla, glyphosate, Monsanto, izibulala-zinambuzane, izinsalela
I-Broken FOIA Kude Nokuphulukiswa njengama-US Agent Cheat Public
Posted on September 2, 2016 by UCarey Gillam
EMelika, enye yemigomo eyisisekelo yentando yeningi yethu ukuthi uhulumeni wethu uyasisebenzela. Kufanele sibe no “hulumeni wabantu, wabantu, wabantu” njengoMongameli u-Abraham Lincoln ngenhlonipho wathi. Ukusiza ukuqinisekisa ukuthi umgomo uyalandelwa siyabona ukuthi ukufinyelela komphakathi elwazini mayelana nezenzo zikahulumeni kubaluleke kakhulu ekulondolozeni inkululeko yomuntu ngamunye neyenhlanganyelo.
Kepha kulo nyaka, njengoba sithatha ama-50th isikhumbuzo sokusayinwa koMthetho Wenkululeko Yolwazi (i-FOIA), ubufakazi obandayo bubonisa ukuthi iningi lezinhlangano zethu zombuso ziyasebenza ukucindezela le nkululeko ngokufihla ulwazi emphakathini ngokungafanele. NgoJuni, uMongameli Obama wasayina umthethosivivinywa mhlawumbe kuhloswe ngayo ukuqinisa i-FOIA. Kepha ngenkathi umthetho unikeza uhla lwezinguquko ezintsha zenqubo, izinhlinzeko azenzi okuncane ekuvimbeleni ukuqhubeka kokuhlukunyezwa okuvamile nezaba esizibonayo kuma-ejensi enqikaza ukuguqula imininingwane ngemisebenzi yabo.
Imizamo yokubalekela umthetho we-FOIA seyiyinsakavukela umchilo wesintu kangangokuba i-US Government Accountability Office ihlanganisa ithimba manje ukuze liqale ukucwaningwa okubanzi kokuthobela kwe-FOIA ezinhlanganweni zombuso. Ukubuyekezwa kwe-GAO kuzoqala kule nyanga, ngokusho kwe-GAO.
Uphenyo luza ekuphenduleni isiqondiso ekhishwe yiKomidi Lezendlu Lezokuqapha kanye Nezinguquko kuHulumeni kanye neKomidi Lezigele leZobulungiswa, izinhlangano zebandla ezingamele imisebenzi ye-FOIA. Futhi kuza ngemuva umbiko oqalekisayo wekomidi leNdlu elathola isiko legatsha eliphethe likahulumeni wesifundazwe "likhuthaza ukucatshangelwa okungekho emthethweni okuvumela ukugcinwa kwemfihlo lapho kuphendulwa izicelo ze-Freedom of Information Act." Ama-ejensi kufanele asebenze futhi aphendule abafake izicelo be-FOIA kungakapheli izinsuku ezingama-20 zokusebenza, kepha noma ngubani owenza izicelo ze-FOIA njalo uyazi ukuthi kungenzeka kube izinyanga, uma kungenjalo iminyaka, ngaphambi kokuba kukhiqizwe amarekhodi. Uma futhi lapho amarekhodi ephendulwa, imvamisa ahlehliswa kakhulu, okwenza kungabi nalutho. Ikomidi leNdlu elibhekele ezokwengamela laphinde lathola ukuthi izingcindezi zepolitiki zihlala zikhona, kanti imibhalo ibhekwa njengenenkinga noma ihlazo eligodliwe.
"Imfihlo ikhuthaza ukungathembani," kusho umbiko wekomidi.
Encwadini abayibhalele i-GAO, abaholi bekomidi lenhlangano bacaphune ukuhlaziywa kwe-Associated Press othole abantu abacele amarekhodi bathole amafayela ahlolwe noma cha nhlobo kumarekhodi angu-77 amaphesenti ezicelo ngonyaka odlule. Sekukonke, abaphathi baka-Obama bacubungule izinto abaziphendulile noma benqaba ngokuphelele ukufinyelela kuzo kumarekhodi angama-596,095.
Ukugcwalisa i-FOIA kulezi zinsuku kufana nokuwela ingilazi ebheke kokunye okungokoqobo lapho ukuhleleka nengqondo kungatholakali. IPro Publica, inhlangano yezentatheli ephenya ngokungenzi inzuzo, isanda kunikelwa i-litany yezibonelo wokunyathela uhlangothi lukahulumeni komthetho.
Futhi ngihlala ngicwile kwi-odyssey yami ekhungathekisayo ye-FOIA. NgoJanuwari, ngacela amarekhodi athile ku-Food and Drug Administration maqondana nohlelo lokuhlola ukuphepha kokudla i-ejensi eyenzayo ukukala izinsalela ze-pesticis ekudleni. Lapho ngibuza ngesimo sesicelo sami, ngemuva kwezinsuku zokusebenza ezingama-20 ezidlulile, i-ejensi yangitshela ukuthi ilinde uphiko lwayo lokuhlola izidakamizwa kanye nesikhungo salo somuthi wezilwane ukufuna amarekhodi. Imibhikisho yami yokuthi amarekhodi ngokusobala ayengagcinwanga ezidakamizweni ze-FDA noma emayunithi wezilwane ayingifikisanga ndawo. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, i-FDA ivumile ukuthi isicelo kumele sinikezwe uphiko lwayo lokuphepha kokudla, kodwa-ke ngatshelwa ukuthi impendulo izobambezeleka ngoba kukhona "ukusilela emuva ngenxa yezinguquko zabasebenzi." Ngiphinde ngatshelwa ukuthi amanye amarekhodi kufanele asuswe ne-Environmental Protection Agency, kepha isikhulu se-FDA FOIA esinikezwe isicelo sami besingacaciswanga ukuthi sizodluliselwa kanjani. Kusukela lapho ngitshelwe ukuthi i-ejensi ithole amakhulu amarekhodi aphendulayo esicelweni sami, kepha konke engikutholile empeleni kuyizaba eziningi zezaba nokubambezeleka, kanye nedlanzana lamarekhodi anezingxenye ezimbalwa ezimnyama.
I-FDA ikhombe kaninginingi ukuxolelwa okudumile "(b) (5)", okuvumela ama-ejensi ukuthi enze kabusha imininingwane ayibona njengengxenye "yenqubo yokubonisana." Ikomidi leNdlu lithole ukuthi ukukhululwa (b) (5) kusetshenziswa kabi yizinhlangano zikahulumeni kaningi kangangoba kwaziwa ngokuthi "kukugodle ngoba ufuna" ukukhululwa.
Futhi akuzona nje izinhlangano zikahulumeni ezisebenza ukuvimba ukufinyelela komphakathi kulwazi okungelomphakathi. Amanyuvesi ethu amaningi asemphakathini atholakele enza okungahambisani nemithetho yamarekhodi evulekile yombuso. Inhlangano engiyisebenzelayo, iqembu lokukhuthaza abathengi I-US Ilungelo Lokwazi, ngenyanga edlule wafaka icala ngokumelene neYunivesithi yaseCalifornia-Davis ngemuva kokuthi inyuvesi yehluleke isikhathi esingaphezu konyaka nesigamu ukuvula amarekhodi omphakathi. Futhi, izikhulu zombuso eMichigan badalulwa ngonyaka odlule ukukhuthaza ukukhokhiswa kwemali eshisiwe njengendlela yokudikibalisa izicelo zamarekhodi. Nezikhulu zikahulumeni waseNorth Carolina bayamangalelwa okweqa umthetho wamarekhodi womphakathi kuleso simo, nangokubambezeleka nezimali ezingekho emthethweni.
Lezi akuzona izindaba ezingasho lutho. Imininingwane ibanjiwe mayelana nokuphepha kokudla kwethu namakhemikhali endaweni yethu, ezinhlelweni zezindlu kanye nokubolekiswa kwezindlu, ukwenganyelwa kwamabhange, isenzo samaphoyisa, ukukhathazeka ngamasiko nokulawulwa kwemingcele, izindaba zokhetho nokunye. Ngaphandle kolwazi oluyiqiniso ngokusebenza kukahulumeni, umphakathi awukwazi ukwenza izinqumo ezinolwazi ebhokisini lokuvota noma wazi ngisho nokuthi uyayeseka noma uyayiphikisa imigomo yomphakathi.
OwayenguMongameli uJimmy Carter uthe: “Esikhathini esiningi, ukwambulwa kweqiniso, noma kungemnandi, kuyazuzisa.”
Olunye uhlaka lomthetho omusha osayinwe ngalo uJuni ukwakhiwa kweChief FOIA Officers Council (CFO), iqembu lezikhulu ze-FOIA eziphathiswe ukuthuthukisa izincomo zokwandisa ukuthobela i-FOIA kanye nokusebenza ezinhlelweni ezizokwandisa ukubonakala. Iqembu liphethe i- umhlangano womphakathi Septhemba 15. Izintatheli nabanye abanentshisekelo bayakhuthazwa ukuba babe khona.
Kuyisinyathelo esincane esihle phambili. Kepha abaholi bethu eWashington bangenza, futhi kufanele, benze okuningi ukuqinisekisa ukuthi iqiniso ngohulumeni wethu akunzima kangako ukulithola.
(I-Article ivele ekuqaleni eThe Hill http://thehill.com/blogs/pundits-blog/healthcare/294192-how-freedom-falls-broken-foia-far-from-healing-as-us-agencies)
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu FDA, FOIA, Ukudla, ezombusazwe, UC Davis